संकटमा लाेकतन्त्र : जनता जे चाहन्छन्, शासकले त्यसकाे उल्टाे गरिदिन्छ
अक्सर नेताहरू भाषणमा छुटाउँदैनन्, ‘लोकतन्त्र संकटमा छ ।’
कहिले शेरबहादुर देउवा त कहिले बाबुराम भट्टराईले यस्तो भनिरहेको सुन्न पाइन्छ । नेपालमा अरु पनि थुप्रै नेता छन्, जो लोकतन्त्रप्रति बारम्बार चिन्ता जाहेर गरिरहन्छन् । हिजाेआज त नागरिक समाज, प्रेस र न्यायिक जगत नै लाेकतन्त्रप्रति सुर्ताएका छन् । लाेकतन्त्रकै लागि सडकमा मानिसहरू स्वतःस्फुर्त निस्किन थालेका छन् ।
त्यसो त, यसरी लोकतन्त्रका खातिर गुहार माग्ने नेता नेपाली मात्र होइन, अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामादेखि बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री टेरिजा मे, जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलसम्म छन् ।
पूरै संसारका नेता चिच्याइरहेका छन्, ‘लोकतन्त्र संकटमा छ, बचाऔँ ।’ के वास्तवमै लोकतन्त्र संकटमा छ त ? छ भने कोबाट लोकतन्त्रलाई खतरा छ ?
हालै मात्र म्यानमारमा सैन्य कु भयाे । प्रजातन्त्रवादी नेताहरूलाई धमाधम गिरफ्तार गरिएकाे छ । त्यहाँ लाेकतन्त्र संकटमै छ ।
सिरियामा बशर अल असदको सरकारले आफ्नै नागरिकमाथि गोली बर्साइरहेकाे छ । त्यहाँ पनि लोकतन्त्र संकटमा छ । चीन सरकारले हङकङजस्तो स्वायत्त क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहेकाले लोकतन्त्रमाथि खतरा छ । इरान, इराक र रुसमा धाँधलीरहित चुनाव हुँदैन, त्यसले शासन व्यवस्थामा नोक्सान नै गर्छ । बलियाे प्रजातान्त्रिक मुलुक मानिएकाे भारतमा महिनाैं दिनदेखि किसानहरू अधिकारका लागि आन्दाेलित छन् ।
जुन जुन मुलुक तानाशाहकाे शिकार बनेका छन्, ती त बदनाम नै छन् । जस्तो कि रुस, इजिप्ट वा इरानमा नाम मात्रको लोकतन्त्र छ । तर, बलियो र चुस्त शासन व्यवस्था भएका अमेरिका, बेलायत, भारतजस्ता देशमा लोकतन्त्र किन कमजोर बनिरहेको छ ?
हालै मात्र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आएका मध्यपूर्व र पूर्व युरोपका देश हुन् वा शताब्दीअघिको पुरानो प्रजातान्त्रिक मुलुक टर्की, सबैतिर तानाशाहले कब्जा जमाएका छन् । आम जनताको अधिकार घटाइँदै छ । शासकहरू मनलाग्दी निर्णय गरिरहेका छन् । आफ्नै शासनप्रति जनताको भरोसा कम हुँदै गएको छ ।
रुस र इरानजस्ता देश त बदनाम नै छन् । तर, अमेरिका र बेलायतजस्ता देशमा समेत लोकतन्त्र संकटमा परेको भनिँदै छ । यस्ताे किन ?
नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे शिलापत्रमा लेख्छन्, ‘विश्व परिवेश र मुलुकको विद्यमान अवस्थाको पृष्ठभूमिमा लोकतन्त्रका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्ष जताततै गम्भीर बहसका विषय बनेका छन् । जाति, धर्म वा राष्ट्रको नाममा लोकतन्त्रको उदार आदर्श र मानवीय मूल्य–मान्यतामाथि प्रहार हुने क्रम बढ्दो छ ।’
कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्काको बुझाइमा लोकतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन भएको छ । यसलाई लिएर पश्चिमा देशहरू पनि चिन्तित छन् ।
पछिल्लो एक दशकमा संसारमा जुन खालको राजनीतिक परिवर्तन भयो, मानिसहरू त्यसबाट हैरान छन् ।
‘किनकि, लोकतन्त्रलाई एकताको प्रतीकका रूपमा हेरिन्थ्यो । कुनै पनि देशमा यसलाई एक विशेष तराजुमा तौलिइन्थ्यो । यसकारण आज संसारमा जुनखाले परिवर्तन देखिएको छ, त्यसलाई लोकतन्त्रका लागि खतरा भनिएको हुनुपर्छ’, खड्का भन्छन् ।
परराष्ट्रविद् एवम् अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जानकार डा. दिनेश भट्टराई लोकतन्त्र पछिल्लो एक दशकयता कमजोर बनेको बताउँछन् । पूर्वी युरोप र मध्यपूर्वका देशमा लोकतन्त्रको जुन स्थान थियो, त्यो फेरि तानाशाहको कब्जामा गएको देख्न सकिन्छ ।
बेलायती संस्था इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्सले पछिल्लो १४ वर्षदेखि संसारभरको लोकतन्त्रलाई एक विशेष स्केलमा तुलना गर्दै आएको छ । संस्थाले लोकतन्त्रबारे ‘डेमोक्रेसी इन्डेक्स’ नामकाे रिपाेर्ट नै प्रकाशित गर्दैअाएकाे छ ।
यो रिपोर्टमा करिब १ सय ६७ देशको अवस्थाको व्यहोरा राखिएको छ । उदाहरणका लागि, त्यहाँको सरकार कस्तो छ ? नागरिकले कति अधिकार हासिल गरेका छन् ? सरकारका नीतिहरू कस्ता छन् ? निर्णायक तहमा जनताको सहभागिता कति छ ?
यी सबै कुरा तुलना गरिएपछि मुलुकहरूलाई डेमोक्रेसी इन्डेक्समा नम्बर दिइन्छ । अर्थात्, कहाँ लोकतन्त्र बलियो छ ? कहाँ कमजोर छ ? कहाँ तानाशाही छ ?
बीबीसी लेख्छ, ‘संस्थाले निकालेका रिपोर्टहरू हेर्दा सन् २०१५ यता विश्वमै लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । तर, त्यसअघि धेरै देशमा लोकतन्त्रको स्थिति स्थिर थियो । तर, केही वर्षयता ७० देखि ९० को हाराहारीमा मुलुकहरू तल झरिरहेका छन् । ३५ देखि ४० वटा देशमा मात्र लोकतन्त्र स्थिर (ठीकै) छ ।’
पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक मानिने देशको संख्या पनि घटिरहेको छ । रिपोर्टमा अमेरिकामा समेत लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको औँल्याइएको छ ।
नर्थ क्यारोलाइनामा अस्वेत मतदाताहरूको मताधिकार खोसिएकोलगायत घटनापछि अमेरिकालाई पनि पूर्ण लोकतान्त्रिक मुलुकको रूपमा हेरिँदैन ।
संसारमै अहिले जुन तरिकाले लोकतन्त्रको प्रयोग हुँदै छ, त्यहाँ पुँजीवादीहरूको दबदबा छ । बिचौलियाहरू नीति बनाउनमा अहम् भूमिका निभाउँछन् । यसमा आम नागरिकको हितको ख्याल गरिँदैन । जस्ताे कि, भारतमा कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, बिक्री र भण्डारणसम्बन्धी तीनवटै कानुन विचाैलियाकाे दबाबमा ल्याइएकाे भन्दै किसानहरू आन्दाेलित छन् ।
अमेरिकामा अनपेक्षित रूपमा तत्कालीन समयमा डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जिते । यसको अर्थ जनताको रुचिमा परिवर्तन देखियाे । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामा जनस्तरमा निकै रुचाइएका थिए । उनको छवि एक असल नेताका रूपमा थियो ।
तर पनि उनको लोकप्रियता पार्टीका लागि भोट बटुल्नमा खासै सहयोगी बन्न सकेन । किनकि, अमेरिकी जनता तत्कालीन व्यवस्थामा बदलाव चाहन्थे । आफ्नो चाहना ट्रम्पले पूरा गर्नेमा उनीहरू बढी विश्वस्त भए । तर, ट्रम्पले उल्टै लाेकतन्त्रमाथि पटकपटक प्रहार गरिदिए । यसपटक अमेरिकीले ट्रम्पको ठाउँमा जो बाइडेनलाई ल्याएका छन् ।
नेपालमा पनि तत्कालीन एमालेको जीतमा केपी ओलीको छविलाई महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ ।राष्ट्रियतासँगै उनले केही नयाँ कुरा जनतालाई सुनाए । पाइप लाइनबाट ग्याँस, रेल र समुन्दमा पानीजहाज नेपाली जनताका लागि नौला कुरा र ठूला सपना थिए । बर्सेनि झोला बोकेर विदेशिइरहेका युवा, तिनका परिवारका लागि आर्थिक समृद्धिको नारा आशाको त्यान्द्रो बन्यो । त्यसैले मतदाताले सिद्धान्त हेरेनन् । नेता र नारा हेरे । त्यसमाथि दुई वामपन्थी शक्ति गठबन्धन गरी चुनावी मैदानमा थिए ।
विवेकशील–साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले संघीय चुनावमा काठमाडौंमा कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहलाई आच्छुआच्छु पारे । नयाँ पार्टीबाट प्रकाशमानमाथि उनले दिएको चुनौती एक खालको जीत नै थियो । उनले अघि सारेका कतिपय मुद्दातिर नागरिकको ध्यानाकर्षण भएको थियो ।
यसर्थ, अब राजनीतिक विचारधाराको लडाइँको भर रहेन । सन् १९९० को दशकभन्दा अघि संसारमा पुँजीवाद र साम्यवादबीच लडाइँ थियो । मतदाताले दुईमध्ये एक विकल्प चुन्नुपर्थ्यो ।
तर, आज वामपन्थी दल होस् वा पुँजीवादी, सबैको सिद्धान्त उस्तै लाग्छ । नेपालमा राप्रपाबाहेक सबै दलले समाजवादका कुरा गर्छन् । उनीहरूले भनेको समाजवाद घुमाइफिराइ उस्तै देखिन्छ ।
जनताको चाहना बदलिँदो छ । जनता सत्तामा सहभागिता चाहन्छन् । डा. भट्टराई भन्छन्, ‘जब शासन व्यवस्था जनताको चाहना र आवश्यकताअनुसार सञ्चालन हुँदैन, अनि त्यस्तो व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा कम हुन्छ । उनीहरू विकल्प सोच्न थाल्छन् ।’
बीबीसीका अनुसार, अमेरिकासहित विभिन्न मुलुकका संस्थाका रिपोर्टले देखाउँछन्, ‘आज करिब २० प्रतिशत मानिसलाई मात्र लाग्छ, उनीहरूको सरकारले सही निर्णय गर्छ । सन् १९५८ मा यो आँकडा ७३ प्रतिशत थियो । प्रष्ट छ, लोकतन्त्र निकै कमजोर भइसकेको छ ।'
यसकारण जब केपी ओली, डोनाल्ड ट्रम्प वा बेलायतका नाइजल फराजजस्ता नेताले पूरै प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने तथा एक नयाँ फेरबदलकाे कुरा गरे, तब जनताले उनीहरूको भाषणमा ताली बजाए, साथ पनि दिए ।
डा. भट्टराई थप्छन्, 'जनता परिवर्तन चाहन्छन् । तर, जनताले विश्वास गरेकाहरूले जनचाहनाकाे पूर्णतः व्यवस्था गरिदिन्छन् । त्यसले जनतामा नैराश्य पैदा गर्छ ।'
अमेरिकामा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनाव लडेका र त्यहीअनुसार शपथ खाएका राष्ट्रपति डाेनल्ड ट्रम्पले लाेकतन्त्रमाथि धावा बाेल्दै थुप्रै गतिविधि गरे ।
नेपालमा केपी ओली पनि चुनावी प्रक्रियाबाट चुनिएका हुन् । पछिल्लो राजनीतिक संकटबाहेकको कुरा गर्ने हो भने एक तप्काले उनलाई उतिबेलैदेखि लोकतन्त्रका लागि खतरा ठानेकै हाे । यसअघि ओलीलाई लोकतन्त्रको खतरा देख्ने पनि अरु कोही होइनन्, कुनै बेला ओलीजस्तै चुनावी प्रक्रियाबाटै सत्ता चलाएका व्यक्ति हुन्, जो सत्तामा रहुञ्जेल जनताका मुद्दामा गम्भीर बनेनन् । सत्ताको नजिक भएका बेला पनि जनताको कुरा सुनेनन् । आफूअनुकूल परिस्थिति नभएकाले ती व्यक्तिले लोकतन्त्रमाथि खतरा देखे ।
आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउँदा चुपचाप लागेका पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपालहरू लोकतन्त्र संकटमा छ भन्दै त्यही माइतीघरको सडकमा पलेँटी कसेकाे ठीटलाग्दो दृश्य देखियो ।
‘आज जनता आफ्ना मुद्दाको तत्काल सुनुवाइ चाहन्छन् । आफ्नो सहभागिता चाहन्छन् । नेतृत्वपंक्ति आफ्नै स्वार्थमा बढी केन्द्रित छ । सरकार जनअपेक्षाअनुसार चलेको छैन । यसले जनतामा निराशा छाएको छ, यो लोकतन्त्रका लागि चुनौतीको विषयचाहिँ हो’, खड्का भन्छन् ।
डा. भट्टराईका अनुसार कहिलेकाहीँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएका नेताले पनि नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरिरहेका हुन्छन् । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासीहरूको प्रवेशमा रोक लगाए । बेलायत सरकारले नागरिकको जासूसीको नयाँ कानुन बनायो । नेपालमै सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइयो ।
५ पुससम्म अाइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले गैरसंवैधानिक तबरले प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिए । संवैधानिक निकायमा विवादास्पद छवि भएका पात्र सिफारिस गरे ।
अमेरिका र बेलायतजस्ता देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था मजबुत रहेकाले त्यहाँका नागरिकलाई बढी खतरा नहुने डा. भट्टराई बताउँछन् । ‘लोकतन्त्र त हंगेरी, पोल्याण्डजस्ता देशमा पनि संकटमै छ । जहाँ प्रजातन्त्रको जग त्यति गहिरो छैन’, उनी भन्छन् ।
जनताको आवाज सुन्न र अहिले अपनाइएका कतिपय तरिका बदल्न सके मात्र लोकतन्त्रमाथिको खतरा टर्ने विश्लेषकहरूको मत छ ।
मानव विकासको इतिहासमा लोकतन्त्र यस्तो व्यवस्था हो, जो प्रशासनको सबैभन्दा कुशल तरिका हो । याे व्यवस्थामा जनताको सहभागिता हुन्छ । सरकार चलाउनेहरू जवाफदेही हुन्छन् । यस कारण अफ्रिकादेखि एसियासम्म लोकतन्त्रको माग उठिरहेको छ । याे संकटमा परेकाे भनी चिन्ता प्रकट भइरहेकाे छ ।
जसरी चीन प्रगतितिर लम्किरहेको छ, त्यहाँ लोकतन्त्रका लागि मानिसहरू जुर्मुराइरहेका छन् ।
डा. भट्टराई थप्छन्, ‘तानाशाहमा स्थायित्वको कमी हुन्छ । चीन, रुस वा इरानको शासन अन्त्यमा ढल्नेछ । तर, लोकतन्त्र जीवित रहनेछ । लोकतन्त्रको जरा निकै गहिरो हुन्छ । लोकतन्त्रको स्केल, यसको रङ–रूप बदलिनेछ । पश्चिमा देशले बाँकी दुनियाँलाई लोकतन्त्रको जुन परिभाषा सिकाएका छन्, त्यो पनि अब परिवर्तन भइरहेको छ ।’
हरेक व्यवस्थामा केही कमजोरीसँगै सबल पक्ष पनि हुन्छन् । जस्तो कि, चीनमा सरकारका प्रतिनिधि चुनिँदैनन् । क्षमता र योग्यताका आधारमा उनीहरूलाई मौका दिइन्छ । लोकतन्त्रमा असल मान्छेले नै प्रशासन चलाउँछन् भन्ने हुँदैन । चीनले यो कुरा साबित गरिदिएको छ । चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग ९ करोडभन्दा बढी सदस्य छन् ।
उनीहरू परीक्षा दिएर सदस्य बन्छन् । फेरि उनीहरूको क्षमताअनुसार मौका दिइन्छ । जो काम गर्छ, उसले सफलता पाउँछ । यति हुँदाहुँदै यो व्यवस्थामा पारदर्शिताको कमी छ । चीनमा भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । लाख कोसिस गर्दा पनि चीन भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल हुन सकेको छैन ।
यही बेला लोकतान्त्रिक देशमा चुनावी व्यवस्थाको सबल पक्ष थाहा हुन्छ । जहाँ सरकारलाई जनताको भोटले जवाफदेही बनाउँछ । भ्रष्टाचार गर्ने र जनतालाई नसुन्नेहरू चुनावमा हार्न पुग्छन् ।
तर, चीनजस्तो व्यवस्थाको फाइदा पनि छ । सरकारले काम गर्नका लागि निर्वाचनको चिन्ता लिनु पर्दैन । काममा फोकस हुन पाउँछ । जनताको असन्तुष्टि सरकारका लागि खासै चिन्ताको विषय हुँदैन । उच्च पदमा आसीन व्यक्तिसँग ‘फुल पावर’ हुन्छ ।
लोकतन्त्रको वृक्ष जरैदेखि बलियो हुनुपर्छ । कहीँ अरु नै ठाउँबाट ल्याएर लोकतन्त्रको जरा जमाउने प्रयास गरियो भने त्यसकाे काम छैन ।
आज संसारमै तीव्र गतिमा राष्ट्रवादी पार्टीहरूको विकास भइरहेको छ । यस्तोमा अमेरिका र युरोपले पहिला आफैँभित्रको कमजोरी नियाल्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । डा. खड्का भन्छन्, ‘उनीहरूले पहिला आफ्नो लोकतन्त्रमा भएको कमजोरी हटाए मात्र अरु देशलाई पाठ पढाएको सुहाउँछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि राजनीतिक वृत्त ह्वात्तै तातेको छ । यसबीचमा न्यायालयमाथि नै प्रश्न उठ्ने घटनासमेत बाहिर आएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ भइरहँदा मुद्दाको मिसिलमा संलग्न सक्कल कागजात प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानन्यायाधीशको जानकारीमै फिर्ता लगेको घटनादेखि न्यायाधीशहरूले सटाकसुटुक प्रधानमन्त्रीसँग भेटेकाेसम्म ।
त्यसैले प्रायः दिवसमा मात्र सम्झिइने लोकतन्त्रमाथि बहस भइरहेकाे छ । चर्चामा मात्र होइन, लोकतन्त्र रक्षाका लागि आन्दोलन नै सुरु भएको छ । राजनीतिक घटनाक्रमलाई कलम र पर्दामै सीमित गर्ने लेखक, पत्रकार, कलाकारहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।
उनीहरूका अनुसार १४ वर्षअघि नेपालमा लोकतन्त्र आउँदा जुन खालको उत्साह र उमङ्ग थियो, जनमानसमा अहिले त्यस्तो उमङ्ग शायदै बाँकी छ । लेखक तथा पत्रकार नारायण वाग्ले भन्छन्, ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा नरहेको आभास भएको छ । राजा शासन हुँदा सार्वभौमसत्ता नारायणहिटीमा हुन्थ्यो, अहिले बालुवाटार हुँदै शितलनिवास सरेजस्तो भान भएको छ ।’
मुलुक काेभिड कहरमै छ । धेरै भएको छैन, लकडाउनका बेला जनता भोकभोकै रुँदै सडकमा हिँड्नुपरेकाे । अपवादबाहेक दलहरू उद्धारमा उदार भएर निस्किएनन् । चुनावमा भोट माग्न घरको ढोका र खेतबारीसम्म पुग्ने नेताहरू ‘लकडाउनको पालना’ भन्दै कुनामा बसेर टेलिभिजनमा आफ्ना मतदाताको रोदन हेरे । गाउँघरका विपन्न नागरिकलाई टेलिफोन गरेर सारोगाह्रो के छ, सोधेनन् । तर, राजनीतिक साख जोगाउन रातारात बैठक गर्न, फुट्न र एकीकरण गर्न, समर्थन र विराेधका सभा गर्न भने उनीहरूलाई केहीले रोकेको छैन ।
राहत बाँड्न निस्किएका कतिपय अभियन्तालाई समातेर थुनियो । तर, हुल बाँधेर माइतीघरमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षका कार्यकर्ता उफ्रिइरहँदा प्रहरी मुकदर्शक बनेर बसेको देखियो ।
राष्ट्रिय संकल्प, आवश्यकता, नागरिकका अपेक्षाको पूर्णतः बेवास्ता गर्दै राजनीतिक नेतृत्व कुर्सीको खेलमा लागेको छ । कोभिड खतरा अझै टरेकाे छैन । नागरिक त्रस्त नै छन् । उत्पादनको मूल्य माग्दै किसानहरूले बारम्बार आन्दोलन गरिरहनुपरेकाे छ । तिनका मागप्रति सरकार न विपक्षी दल, कसैको गम्भीर ख्याल पुगेको देखिँदैन ।
लेखक सञ्जीव उप्रेति पनि यसलाई लोकतन्त्रमाथिको संकट नै ठान्छन् । भन्छन्, ‘त्यसैले त हामी लोकतन्त्रका लागि सडकमा आयाैँ ।’
‘मुलुकमा लोकतन्त्र छ भन्न नसकिने, र छैन भन्न पनि नमिल्ने स्थिति छ । लोकतन्त्रलाई शरीर मान्ने हो भने अपेक्षित अंगहरू सबै छन्, निर्वाचित सरकार छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका छ । नागरिकका अधिकार मात्रै होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक र आधारभूत आवश्यकता पूर्तिसमेत संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ । तर, बहुसंख्यक नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्छन्’, नागरिक अगुवा पाण्डे लेख्छन्, ‘जनतालाई न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास छैन, उसका अधिकार सुरक्षित छैनन्, अनि राज्यको नीति र व्यवहार जनहित विमुख छ । मुलुकका केही समुदायलाई विद्यमान संविधानका केही प्रावधानहरू नै मान्य छैनन् । उनीहरू तिनमा संशोधन चाहन्छन् ।’
‘के यो लोकतन्त्र कमजोर भएको होइन ?’, सामाजिक अभियन्ता एवम् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल प्रश्न गर्छन्, ‘हामीकहाँ कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदै छ, जहाँ संविधानलाई ठाडै उल्लंघन गरिन्छ । जनादेशको अपमान गरिन्छ ।’
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २५, २०७७, १९:१६:००